Madaxweyne Joe Biden oo booqasho lama filaan ah ku tagay Aqalka Congress-ka Mareykanka : Calanka.com
Madaxweyne Joe Biden oo booqasho lama filaan ah ku tagay Aqalka Congress-ka Mareykanka
Madaxweyne Joe Biden ayaa booqasho lama filaan ah ku tagay Aqalka Congress-ka Mareykanka maalin un kadib markii dib loo dhigay codbixin muhiim ah oo ku saabsan qorshihiisa kaabayaasha dhaqaalaha oo hal dhibic laba tirilyan oo doollar ah ku kacaya.
Ka dib markii uu la kulmay Dimuqraadiyiinta aqalka wakiilada, wuxuu u sheegay wariyeyaasha inay “codbixintu qabsoomi doonto” – ha ahaato lix daqiiqo, lix maalmood ama xitaa lix toddobaad.
Soo jeedinta kaabayaasha waxay ku raaxaysanayaan taageerada xisbiyada ee Aqalka Koongareeska. Balse xidhibaanada Dimuqraadiyiinta ee Aqalka ayaa sheegaya inaysan iyaga u codayn doonin ilaa Congress-ku uu sidoo kale ansixiyo sharci balaayiin doolar ku kacaya oo lagu kaabayo isbeddelka cimilada iyo daryeelka bulshada.
Afhayeenka aqalka, Nancy Pelosi, ayaa xaqiijisay in cod u qaadista hindise sharciyeedka kaabayaasha oo ay rajaynaysay in la qaban doono Jimcaha dib loo dhigi doono.
Codbixintii khamiista ee hindise sharciyeedka kharashaadka kaabayaasha ayaa dib loo dhigay mana cadda goorta la isku dayi doono in cod kale loo qaado.
Booqashadii Biden ee Aqalka Capitol Hill ee Jimcihii ayaa waxaa uu si gaar gaar ah ula kulmaya Golaha Dimuqraadiga si Meesha looga saaro ismariwaaga taagan.
Warbaahinta ayaa sheegtay in madaxweyne Biden uu doonayay in uu dhiiri geliyo isu tanaasulka kooxaha.
Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganeysa ilo aan la magaacin ayaa sheegtay in Mr Biden uu soo jeediyay in dib loogu laabto hindise sharciyeedka kharashaadka samafalka iyo cimilada oo lagu soo celiyo $ 2 tiriliyan oo doolar.
Xisbiga madaxweyne Biden ayaa waxa uu labada aqalba ka haystaa aqlabiyadd aad u yar, wuxuuna aad u danaynayaa inuu ku dhaqaaqo saxeexa qorsheyaashiida ka hor doorashooyinka koongareeska ee sannadka dambe, markaas oo ay Jamhuuriyiintu isku dayi doonaan inay mar kale gacanta ku dhigaan aqalibiyadda.